Lioka 4.16-22, Tari-dalana Toriteny Alahady 03 Desambra 2017 (Alahady 1 @ ADVENTO – TAOMBAOVAOM-PIANGONANA) – Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM)
Lioka 4.16-22, Tari-dalana Toriteny Alahady 03 Desambra 2017 (Alahady 1 @ ADVENTO – TAOMBAOVAOM-PIANGONANA)
Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy Kristy mahatratra ny taom-baovaon’ny Fiangonana. Indro atolotra anareo ary ny tari-dalana momba ny perikopa izay hozaraina amintsika manerana ny sahan’ny FLM amin’izany.
“Androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany”
Taom-baovan’ny Fiangonana na “Advento” (Lat. Adventus; fr. tranainy Advenir) na Andro izay ibanjinan’ny Fiangonana ny fihaviana na fahatongavan’ny Jesosy Tompo amin’ny maha Mesia (Kristy) na amin’ny maha “Manjaka Voahosotra” mba hitondra ny Fanjakan’Andriamanitra tanteraka Azy ity Alahady izay misy antsika ity. Maro ny làlana izay azo anazavana ity texte izay anjarantsika ity fa andeha ny anankiray amin’izany dia “izay entin’ity Mpanjaka Voahosotra ity ho an’ny mino Azy amin’izany fahatongavany na fihaviany izany” no ho banjinintsika. Maro koa no azo anombohana izany fanazavana izany fa eto dia ny and. 21 hoe “ANDROANY (σήμερον) no efa tanteraka eto aminareo izany soratra izany” no andeha hiaingantsika.
Ny “ANDRO IRAY” (24 ora) teo amin’ny Jiosy dia manomboka ny maty masoandro ka mifarana amin’ny maty masoandro, izany hoe, misy alina iray sy mazava andro iray izany. Ny voalaza ao amin’ny Gen. 1:ff. no tonga ao an-tsaina amin’izany: andro iray = “nisy hariva, ary nisy maraina”. Fa mbola fonosin’izany ihany koa ny izay voatantara voalohandohany ao amin’ny tantaram-pamoronana hoe “maizina nosoloin’ ny mazava” (Gen. 1:2–3). Izany hoe, ny andro iray (misy alina iray sy mazava andro iray) dia mampahatsiahy ny Jiosy hatrany fampisian’Andriamanitra ny zavatra rehetra ho solon’ny tsy misy. SABATA (fitsaharana, fahafahana) ny andro izay voalaza eto amin’ny texte, andro izay nanambaran’i Jesosy ny programa Mesianikany na ny programany amin’izao fitondrany ny Fanjakan’Andriamanitra izao. Fintininy amin’ny hoe “hitory ny taona ankasitrahan’i Jehovah” izany programa Mesinikany izany. Mifandray tanteraka amin’ny hevitra sy izay tokony ho entin’ny andro Sabata ho an’ny olona izany: ny taon-jobily na ny taom-panafahana na taom-pitsaharana tanteraka no hevitr’izany. Mifamatotra amin’izany, ny filazan’i Jesosy hoe “ANDROANY”, araka izay nanazavana azy teo ambony, izay tsy manondro ihany ny fotoana fa manondro indrindra fa Andriamanitra (ampit. “ny Fanahin’i Jehovah no ato Amiko”) tonga manatanteraka ny fanoloana ny fiaimpiainana tranainy amin’izay vaovao Izy dia ny fanafahana tanteraka ny olona tao amin’izay nampahantra azy, tao amin’izay nanagadrana na namatorana azy, tao amin’izay nanajambana azy ary tao amin’izay nampahoriana azy. Raha lazaina amin’ny fomba hafa dia fanoloany ny fiaimpiainan’ny olona manontolo tao amin’ny Fanjakan’izao tontolo izao sy ny fahafatesana ary ny Devoly (maizina) amin’ny fiaimpiainam-pitsaharana tanteraka izay entiny ho azy ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra kosa (mazava).
Mibanjina ny fihaviany fanindroany hitondra izany amin’ny fahafenoany ny Fiangonana ankehitriny. Kanefa koa ny Fiangonana izay manana Azy ho “present” eo anivony ankehitriny dia efa am-piaininy sahady amin’izany “taon-jobily” na “taona ankasitrahan’i Jehovah” izany, izany hoe, tsy ananan’izao tontolo izao sy ny fahafatesana ary ny Devoly fahefana intsony. Mankalaza ny jobily faha-500 taonan’ny “reformation” sy ny faha 150 taonany ny FLM ankehitriny. Ny 500 taona dia 50 taona impolo. Ny isa folo dia isa masina, manondro ny didy folon’Andriamanitra. Ao ambadik’izany fiaimpiainana araka ny sitrapon’Andriamanitra. Ny 50 taona no taon-jobily araka ny Soratra Masina: taom-pahafahana tanteraka amin’izay manandevo rehetra na izay mamatotra rehetra araka izay efa nanazavana azy teo ambony izany. Ny 150 taona àry dia 50 taona in-telo. Mbola isa masina koa ny isa telo: manondro ny Telo Izay Iray izany. Ny 50 taona in-telo dia manambara ny fahafahan’ny Fiangonana amin’ny fahafenoany sy fahatanterahany araka an’Andriamanitra. Ho “present” mandrakariva eo anivon’ny fiainan’ny FLM anie KRISTY Jesosy izay manatanteraka izany programa Mesianikany izany dia hiaina tokoa amin’izany hevitry ny taon-jobily izany amin’ny fahafenoany sy araka ny sitrapon’Andriamanitra izy sy ny Kristiana izay mandrafitra azy.
Ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary ny Fanahy Masina irery anie ny voninahitra. Amena!